Banking Offshore - Sida Loo Furo Koontada ugu Fiican Adiga
Tilmaamaha Banking Offshore | Sida loo furo xisaab Best
Bangiga bangiga waxaa ka mid ah furitaanka akoon bangi oo dalka dibadiisa ah oo uu ku yaal. Dadku waxay u furaan xisaabtan sababo kala duwan awgood. Tan waxaa ka mid ah ka ilaalintooda hantidooda dacwadaha, deyn-bixiyeyaasha iyo go'aannada, iyo sidoo kale keydinta canshuuraha iyo ballaarinta ganacsiga. Waxaan si joogto ah u cusbooneysiineynaa maqaalkan. Ujeedadayadu waa inaanu ku siino hagaha ugu fiican ee laga wada hadlo sida loo, halka loo wajahayo iyo sababta loo yahay furo koontada bangiga. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnaa sharciyada, qeexitaannada iyo macnaha. Waxaan dib u eegi doonnaa macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan macluumaadka horumarsan ee buug bilaash ah oo online ah waxaad arki doontaa hoosta.
Adeegyada bangiyada ee reer galbeedka adduunka qaab xun bay ku jiraan. Waa xaqiiqo. Waa tan waxa Maaliyadda Caalamiga ah ayaa leh, sida qoraalkan ah, ee bangiyada 30 ugu ammaansan adduunka. None waxay ku yaalliin dalka Mareykanka. Eber. Ka baxsan 50 sare, kaliya shan hay'adaha dhaqaalaha waxay ku yaalliin dalka Mareykanka. Intaa waxaa dheer, afar ka mid ah shanta bangi ee Mareykanka ee ku jira liistada ayaa ah kuwo si fudud bangiyo beero-abuur gobol ah. Waxaa jiray lix AAA lagu qiimeeyay bankiyo shisheeye. Lixda, ma jiro waxay ku yaalliin Mareykanka.
Bangiga Dibadda: Tilmaanta Dhammaystiran.
USA: Dammaanadda Deynta
Ka fikir. Dalka Mareykanka waa dalka ugu deynta badan adduunka. Dal kale ma soo dhowaado. Afarta dal ee leh culeyska ugu weyn ee qaramada, Mareykanka wuxuu labo jeer deynta lambarka labo UK iyo ku dhawaad ​​seddex iyo bar ka badan tirooyinka sedex iyo afar Faransiiska iyo Jarmalka.
Marka, bayaankan furitaanka ee kore ma aha cinwaan u soo jeedsanaya fiiro gaar ah. Waa xaqiiq saafi ah oo ku saleysan caddayn adag. Intaas waxaa sii dheer, muddo dheer kahor Mareykanka wuxuu hoos u dhacay qiimeynta amaahda ee 'Standard & Poor's', oo ah hay'adda qiimeynta ugu weyn shirkadaha iyo dowladda ee adduunka. Dadka Mareykanka ma haystaan ​​sharciyo dalkooda ku yaal oo mamnuucaya bangiyo shisheeye. Marka, si aad u bilowdo ama aad u hesho macluumaad dheeri ah xor ayaad u tahay inaad isticmaasho foomka wadatashiga ama wac lambarada ku yaal boggan. Dhanka kale, fadlan arag hagaha hoose.
New in xisaabaadka dibadda? Ma u baahan tahay inaad cadayso fahamkaaga? Ma dooneysaa inaad akoon ka furato dibadda? Tilmaanta hoose waa tababbar. Waxay siisaa macluumaad dhameystiran labada bilaaba iyo inay xoojiso aqoontaada.
Hagaha Bangiga Dibadda iyo Buugga Bilaashka ah
Cutubka 1: Koontada Bangiga Dhexe: Waa maxay? Maxaa Sababay Mid?
- Faahfaahin faahfaahsan, talooyin iyo sida loo sameeyo
Cutubka 2: The Sababaha Ugu Wanaagsan ee 5 in la furo Xisaabta Bangiga Dibadiisa - Karkari dhoobo
Cutubka 3:Macluumaadka Bangiga Caalamiga ah
Cutubka 4: Quraafaadka
Cutubka 5: Amniga & Amniga
Cutubka 6: Ilaalinta Hantida
Cutubka 7: 6 Dalal Wanaagsan- Baanka Hore ee Baanka Hore
Cutubka 8: Dejinta Koontada Dibedda - Maxaa la Sameeyaa
Cutubka 9: Kaarka Lacagta Kaarka Deynta
Cutubka 10: Qiimaha
Cutubka 11: Meelaha la soo jeediyey
Cutubka 12: Baanka Swisska
Cutubka gunnada: Seeraar iyo kale Cryptocurrency
Dhibaatooyinka Bangiga ee Maraykanka
Aynu si taxadar leh u eegno nidaamka bangiga Mareykanka.
Qaar ka mid ah caqabadihii hore ee bangiyada ee Mareykanka ma aysan gaarsiisanayn heerkii amaan ahaanta ee bangiyada. Tusaale ahaan Bangiga Mareykanka, tusaale ahaan, waxaa goor dhaweyd la ogeysiiyay inaysan gudbi karin imtixaanka walaaca. Tijaabadu waxay ku soo gabagabowday in bangigu $ 33.9 bilyan oo doollar ka yaraaday qadarka kaydka ee ay u baahan yihiin si loo sii wado laba sano oo kale oo dhibaatooyin dhaqaale ah
Xitaa wakaaladda loogu talagalay inay ceymiso bangiyada Mareykanka, FDIC lafteeda, aad ayey u gaaban tahay. Iyagu ma haystaan ​​xaddiga lacagta ee sharcigu u baahan yahay inay haysato si ay u hubiso nidaamka bangiyada Mareykanka.
Intaa waxaa dheer, Kaydka Federalka ee Mareykanka wuxuu ku dulwareegaa baraf khafiif ah. Isugeynta raasumaalka ay kujirtaa waa $ 1.24% roon. Ka fikir. Lehman Brothers wuxuu ku jiray 3% markii ay dacwad u gudbiyeen inuu yahay musalifnimo.
Daraasad dhowaan la sameeyay, waxaa jiray $ 50.7 tirilyan oo deyn ah oo lagu leeyahay qoysaska, ganacsiyada, iyo dowladaha Mareykanka. Tani waxay ka dhigan tahay xad-dhaaf 3.5 jeer wadarta guud ee wax soo saarka guud ee sanadlaha ah ee Mareykanka oo dhan.
Nidaamka Bankiga Dhibaatada
Sidaa darteed way iska cadahay in Mareykanku leeyahay nidaam bangi aad u liita oo ay taageerto urur caymis aad u maal galiya oo ay taageerayaan hey'ado dowladeed oo deyn ahaan lagu leeyahay, oo ay taageerayaan cashuur bixiyaasha. Marka, waa inaanaan weydiin, "Bangiyo ka baxsan xeebta ma nabad baa?" Bedelkeed, waa inaan weydiinaa, "Bangiga ma nabad baa Mareykanka?"
Waxaan si cad u arki karnaa, mar labaad, in tani aysan ahayn mid qalafsan. Waa run dhab ah oo ku salaysan xaqiiqda ka dib. Xaqiiqdii, waa arrin naxdin leh oo la yaab leh oo ku dul fadhiya sida dhagaxa godka caloosha.
Miyaa Looga Dhawaaqay?
Waxaan aragnay waalidkeen oo aadaya bankiga, lacagtooda adag ku shubaya bangiyada, aaminsanaanta bangiyada inay bad qabaan. Dabcan waa amaan, waxaan u maleyn karnaa. Waa bangi, ka dib oo dhan.
Si kastaba ha noqotee, markaad fiiriso tirakoobka websaydhka FDIC, min 2000 ilaa bilawgii 2018, bangiyada 555 ee Mareykanka ayaa fashilmay. Haa, 555. Maskaxda ku hay in FDIC aysan caymis ku gelinaynin lacag-hayaha isu-dheellitirka xisaabta. Kaliya waxay bixiyaan caymiska ugu horreeya ee $ 250,000. Wax kasta oo ka sarreeya xaddigaas waxay ku bixi karaan "baraf" hawo khafiif ah markii bangigaaga uu fashilmo.
Xasuuso dhacdooyinka musiibada ah ee ku dhuftay boobka Bankiga Washington Mutual? Tani waxay ahayd ugu weyn ee bangiga ee taariikhda Maraykanka. Maalin maaliyadeed ayaa dareemay wax kasta oo fiicnaa. Subaxii xigay, way tooseen waxayna ogaadeen in bangigoodu uusan ahayn mid kale.
Sidan ayeyna maanta tahay. Waxay ka hor imaan kartaa waxyaabaha la rumeysan yahay ee nalagu galiyay da 'yar. Laakiin dhammaanteen waxaan ubaahanahay inaan toosno xaqiiqda cusub.
Xaqiiqooyinka Iibinta waxay keenaan Baanka Bankiga Dhexe
Markay wajahayso xaqiiqooyinkan foosha xumaa waxay nooga warbixineysaa xallin cusub. Marka dhamaan waa weyn hay'adaha maaliyadeed waa kuwo aan aad u liita, marka xaqiiqooyinka dhabta ahi iftiimiyaan runtaan. Miyaad u malayn inay macno samaynayso inaad ugu yaraan boqolkiiba boqolkiiba lacagahaaga dibedda ku qabato xilli ammaan ah?
Waxaan hubaa sidaas. Waxaan ku boorinayaa inaad talaabo qaaddo si aad u sameyso xisaab caalami ah sida ugu dhakhsaha badan. Isticmaal lambarka taleefanka or buuxi foomka on this page. Waxaan ka caawinnay kumanaan baahida bangiga ay ku leeyihiin. Intaa waxaa dheer, waxaan ka caawinay dadka inay ilaaliyaan hantidooda tan iyo 1906.
Sida loo doorto xuduud sharci
Way fiicnaan lahayd in la tixgeliyo xukunnada xaalad maaliyadeed oo wanaagsan, oo leh dawladdo nabdoon iyo warshado adeegyo maaliyadeed oo muddo dheer soo jiray. Waxa dadka iyo sharci dejintu sameeyaan ayaa ka muhiimsan waxa ay sheegaan. Marka, haddii ay sumcad ku leeyihiin xasillooni dhaqaale, taasi waxay door weyn ku leedahay sidii loo dhisi lahaa meesha dhaqaale.
Waa maxay tan dhab ahaantii ku saabsan?
Maskaxda ku hay in hubinta lacagahaaga lacageed ee xeebaha aysan ka soo bixin canshuurta canshuurta ee canshuurta canshuurta sida Cayman Islands ama Hong Kong. Waxay ku saabsan tahay kala-jaadnimada hantida. The Tusaale ahaan, dawladda Maraykanku, ma aha mid daneeynaya haddii aad lacag ku leedahay dibadda ilaa intaad ka warbixiso dakhligaaga. Bixinta lacag-bixinta lacageed ee badda ayaa ah, iyo mid weyn, dhacdo canshuur dhexdhexaad ah. Sidaa darteed, guud ahaan ma kordhinayso ama yareeynin canshuurahaaga. Malaayiin qof oo muwaadiniin ah ayaa leh xisaabaadka qashin-saarka ah, maaha inay calaamad u noqoto maamulka canshuurta haddii aad mid leedahay.
Iyadoo ay soo ifbaxday bangiyada khadka tooska ah, awooda xargaha khadka tooska ah, kaararka taleefanka iyo kaararka deynta, xawaaladaha bangi ma ahan runtii in aad uga duwan waddada banki. Intaas waxaa sii dheer, waa wax caadi ah in la helo bangiyo soo bandhigaya heerar dulsaar oo ka sareeya, inta badan aad uga badan, waxa ay bixiyaan bangiyada maxalliga ah.
Ka fikir it. Mushaharka Mareykanka aad ayuu u sarreeyaa marka loo eego kuwa kale. RQiimaha guryaha Canshuuraha way sarreeyaan. Caymiska caafimaad ee shaqaalaha wuxuu saaran yahay saqafka. Kharashaadkaasi waxay qaadayaan faa iido weyn faa iidada bangiga ee Mareykanka, UK, Canada ad dalal kale oo qiimo badan. Haddii kharashaadka ku baxa bannaanka shisheeyaha way ka yar yihiin, wax badan ayaa kaaga hadha oo ay kugu bixin doonaan, si ay kuugu shubaan.
Maxay tahay sababta Bangiyada Mareykanka u Xaqiijiyaan Xaqiiqda
Bangigaaga maxalliga ah ayaa iska cad inuusan qaadan doonin xayeysiis telefishan oo kuu sheegaya inaad waxbadan heli karto dulsaarka si ka fiican xeebaha. Bangiyada shisheeye, ayadoon la haysan rukhsad bangi gudaha ah, sharci ahaan kuma xayeysiin karaan gudaha. Marka sidee kale ogaan lahayd? Iyagu taas kuu sheegi maayaan bankiyo shisheeye ayaa xoog badan in ka badan bangiga wadada.
Bankiyada ugu xoogan
Switzerland, Jarmalka, Australia, Singapore, Hong Kong iyo dalal kale oo badan ayaa leh bangiyo aad u xoogan, oo aamin ah. Runti idinka ayaa leh qaadida gudaha, oo ku saleysan labaatan sano oo waayo-aragnimo ah, taas oo ah Xarumaha bangiyo shisheeye waxay akoonto u furaysaa ajaanibta, waxay bixin doontaa maalgashi koritaan, waa mid dhaqaale ahaan adkaysi leh, leh adeegyo munaasib ah, runtiina way ku faraxsan yihiin inay la shaqeeyaan.
Waa Lacagtaada - Hel caawin
Aad ayey muhiim u tahay in la helo hagida qof khibrad u leh dejinta akoonnada meel ka baxsan. Bangi kasta wuxuu naftiisa ka dhigi karaa mid weyn. Laakiin kaliya qof khibrad leh - oo waxaan soo dejinnay kumanaan kun xisaabaadka xeebaha - Waan kuu sheegi karaa kuwa runtii ula dhaqmaya kuwa wax iibsada ku habboon. Ka dib oo dhan, waxaan ka wada hadleynaa lacagtaada halkan. Hubso, waxay ku kici kartaa wax yar. Malaha wax aad uga yar intii aad u maleysay. Laakiin way ka fiican tahay tan kale ee waxyeellada leh ee doorashada bangi qaldan.
Talo-siinta Bangiga Suuqa
Bixiyeyaasha akoonnada bannaanka ee sharci-darrada ah sharci ahaan kuma xayeysiin karaan badda dusheeda. Waxaa intaa dheer, bangiyada gudaha waa deeq-bixiyeyaal siyaasadeed oo waaweyn. Saas darteed, waxaa jira isku-dar la'aan macluumaad iyo macluumaad khaldan oo xog-ogaal ah oo ku saabsan badda xisaab. Natiijo ahaan, dadka qaarkiis waxay leeyihiin aragti been ah in ay tahay sharci-darro - waxa hubaal ah inaysan ahayn. Qaar waxay u arkaan in ay tahay hab lagu caydhiyo canshuurta - maahan. Qaar waxay u arkaan in dambiilayaashu ay u isticmaalaan si ballaaran - tani waa dhif iyo naadir sababtoo ah bangigu wuxuu lumin karaa liisankiisa si uu u aqbalo lacagaha nadiifka ah.
Runtu waa, haddii aad ka timid Mareykanka ama UK, tusaale ahaan, in kasta oo aad soo sheegto dakhligaaga adduunka oo dhan, dawladda ayaa daryeeli lahayd wax ka yar. Tixgeli in ay jiraan tirilyan doolar oo dib iyo gadaal ah uga duulaya xuduudaheena sanad walba. Sidaa darteed, koontadaadu uma badnaan doonto inay ku soo rogto radar federaali ah.
Waa maxay ikhtiyaaradayda?
Waxaa jira xulashooyin cajiib ah oo la heli karo qof raadinaya koonto bangi oo ka baxsan. Waxaa jira badda bangiyada in ku takhasusay ilaalinta hantida laga bilaabo dacwadaha. Bangiyada kale waxay u adeegaan kuwa ubaahan akoonada xawilaad ganacsi oo heer sare ah. Kuwa kale ayaa ku takhasusay maamulka lacagta maalgashadayaasha. Waxa kale oo jira bangiyo ka shaqeeya dibedda Ganacsi sicirka qiimaha jaban ah Ganacsato samee-naftaada. Qaarkood waxay ubaahan yihiin lacag dhigis ugu yari, sida $ 2000 US. Kuwa kale waxay la yimaadaan shakhsiyaad qiimo sare leh oo u baahan lacag dhigaal ah, markay furayaan koonto bangi, $ 250,000 US ama ka badan.
Qaarkood waxay bixiyaan dulsaar ka sareeya bangiyada gudaha, sababtoo ah dhismayaasha kharashka yar. Qaar kale waxay bixiyaan mushahar bixinta suuqyada gudaha. Qaar ka mid ah awooda dhulka xeebaha, sida Ciraaqiyiinta Kukiyada, ma aqoonsana xukunka ajnabiga ah. Marka, marka lagu daro kalsooni dibadeed, waxay u adeegsadaan kuwa raadinaya ilaalinta hantida.
Markii la dejinayo xisaabaadka bangiga shisheeye, dadaalka saxda ah iyo ogaanshaha-xeerarka macaamiishaadu waa mid guud. Nidaamyada bangiyada ee oggolaanaya xisaabaadka bangi shisheeye waxay ku saabsan yihiin aqbalaadda ajaaniibta doonaya inay ka baxsadaan canshuur dalalkooda. Waxay kale oo eegi doonaan arjigaaga si loo hubiyo in halka lacagta aad ka hesho ay yihiin sharci. Markaa, hadaad rabto inaad furato koonto bangi oo dibada ah, u diyaar garow. Waxay kaa dooni doonaan inaad si buuxda u sheegto qofka aad tahay iyo halka deebaajigaagu ka yimid.
Bangiga Dhulka ee Badbaadinta Barta Internetka
Bangiyada oo dhami waxay kaa doonayaan inaad keento aqoonsi sax ah. Bangiyada qaar ayaa kuu oggolaanaya inaad ku keento dokumentiyo boostada. Kuwa kale waxay kaa rabaan inaad qof ahaan isku muujiso. Sababtoo ah xiriirka aan la leenahay bankiyo badan oo adduunka ah, waxaan nahay “uqalmeeSi aan awood ugu yeelano akoonnada furan macaamiisha meel fog halkaasoo dadku aysan sidaas yeeli karin naftooda. Intaa waxaa dheer, in badan oo ka mid ah bangiyadaha xeebta ayaan xitaa xisaabaad u furi doonin dadka Mareykanka ama kuwa Kanada. Waan ognahay kuwa furi doona xisaabaadka ajaanibta, iyo baahi la'aan safar. Adeegso foomka ku yaal boggan ama lambarka kor ku yaal si aad u hesho jawaabo dheeraad ah oo ku saabsan su'aalaha ku saabsan xeebaha-bangi.